နာမည်ကျော်စာရေးဆရာတွေရဲ့ နာမည်တစ်လုံးဝတ္ထု (၃) ပုဒ် - For her Myanmar
နာမည်ကျော်စာရေးဆရာတွေရဲ့ နာမည်တစ်လုံးဝတ္ထု (၃) ပုဒ်
နာမည်တစ်လုံးတည်းဆိုတော့ ဘာစာအုပ်တွေများပါလိမ့် ?
ယောင်းတို့ရေ … ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက် ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ? အပြင်မှာ နေကလည်းပူပူဆိုတော့ အိမ်မှာပဲ စာဖတ်ရင်းအနားယူလိုက်ကြရင် မကောင်းဘူးလား ယောင်းတို့အတွက် Stella ဥထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းစာအုပ်လေး (၃) အုပ်ရှိတယ်။ ဘယ်လိုထူးဆန်းလဲဆိုတော့ ဒီစာအုပ် (၃) အုပ်လုံးက နာမည်တစ်လုံးတည်းပဲပါတယ် ယောင်းရဲ့။ စာအုပ်တွေကတော့ …
မကြာသေးခင်က ဝက်ဝက်ကွဲနာမည်ကြီးသွားတဲ့ “မီ”။ မီ ရဲ့ ကလောင်ရှင်ကတော့ ဆရာမကြည်အေး။ ပျော့ခွေကျလာတဲ့ တွယ်ရာမဲ့ မီ။ လောကကိုရွဲ့နေတဲ့ သနားစရာ မီ။ ဖျော့တော့တဲ့အလှပိုင်ရှင် မီ။ ယောကျာ်းတွေကို ရူးစေတဲ့ မီ။ သတင်းကြီးလှတဲ့ မီ နဲ့ ဦးသော်ဆွေတွေ့ကြတဲ့အခါ ဦးသော်ဆွေကော အခြားပုရိသတွေလိုပဲ မီ့ဆီမှာ ကျရှုံးသွားမှာလား ? မီ့မှာဘယ်လို နာကျည်းချက်တွေရှိနေလဲ ? မီနဲ့ ပက်သက်နေတဲ့ မောင်ကိုလေး၊ မြို့ပိုင်ဦးဘချစ်၊ သူဌေးဦးတင်မောင်၊ နာမည်ကြီးလူမိုက်ရွှေဓားမြောင်တို့ကြားမှာ ဘာအရှုပ်အရှင်းတွေ ပေါ်လာဦးမလဲ ? ဆိုတာတွေကို ဆရာမကြည်အေးရဲ့ “မီ” ဝတ္ထုမှာ ဖတ်ရမှာဖြစ်ပြီး မီ့ကို အပြင်လောကမှာပါ ရင်းနှီးနေသလို ခံစားစေရမယ့် ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ပါ။
Related article >>> ဝတ္ထုဖတ်ရင်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခံစားနေရသလို စီးမျောသွားမယ့် ရသစာအုပ်(၃)အုပ်
ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာရဲ့ “မေ” က မျက်လုံးပြာပြာ ရုပ်ရည်သနားကမားနဲ့ ဘိုဆန်ဆန် မိန်းကလေးတစ်ယောက်။ မေက အထက်တန်းလွှာလူကုံထံအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဝင်ဆံ့ချင်ပေမဲ့ ဝင်ဆံ့လောက်တဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာငွေကြေးမရှိ။ ဒီတော့ သူ(မ)ရဲ့ အလှနဲ့ မာယာကို သုံးပြီး သူ(မ)ခုံမင်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲဝင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ ဘယ်သူတွေက မေ့ဘဝရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ပါဝင်လာမှာလဲ ? ဘဝရဲ့ဇာတ်ခုံမှာ မေတစ်ယောက် ဘယ်နေရာကနေ ကပြမှာလဲ ? ငွေမက်လွန်းတဲ့မေ အမှားတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမလဲ ဆိုတာတွေကို သင်ခန်းစာရဖွယ် ဖတ်ရှုရမယ့် ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
Related article >>> မြို့ပြလူနေမှုဘဝတွေကို ပုံဖော်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးနှစ်အုပ်အကြောင်း
ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက်အထက်တန်းလွှာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ “မြိုင်” ဆိုတဲ့မိန်းမပျိုလေးဟာ ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်ရဲ့ ကလောင်ထက်က ပေါ်ထွက်လာသူပါ။ ခင်ပွန်းမျက်နှာတစ်ရွာထင်ပြီး လိုက်ပြေးခဲ့တဲ့ မြိုင်။ ရွှေဇွန်းကိုက်လာရတဲ့ အခြေအနေကနေ အခြေခံလူတန်းစားဘဝရောက်လာတဲ့အခါ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့ မြိုင်။ အခက်အခဲတွေက ကျရှုံးစေလား ပိုသန်မာလာစေလား ? သိချင်ရင်တော့ မြိုင် ကို ဖတ်ပါ။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က အသိုင်းအဝိုင်းကွာဟမှုတွေ၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ၊ ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ ရုန်းကန်ရတဲ့ ဘဝတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်သရုပ်ဖော်ထားတာမို့ ယောင်းတို့အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
Related article >>> လူငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့စာအုပ် (၅)အုပ်
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း ပိတ်ရက်မှာ ဖတ်စရာစာအုပ်ကောင်းလေးတွေ တိုးလာပြီထင်ပါတယ်။ Stella က စာအုပ်ကောင်းလေးတွေပဲ စုဆောင်းပေးထားတာမို့ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ဦးနော်။ ဒါဆို နောက်တစ်ပတ်မှ စာအုပ်အသစ်လေးတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ကြမယ်။
နာမညျတဈလုံးတညျးဆိုတော့ ဘာစာအုပျတှမြေားပါလိမျ့ ?
ယောငျးတို့ရေ … ဒီတဈပတျ ပိတျရကျ ဘာတှလေုပျဖွဈလဲ? အပွငျမှာ နကေလညျးပူပူဆိုတော့ အိမျမှာပဲ စာဖတျရငျးအနားယူလိုကျကွရငျ မကောငျးဘူးလား ယောငျးတို့အတှကျ Stella ဥထားတဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျးစာအုပျလေး (၃) အုပျရှိတယျ။ ဘယျလိုထူးဆနျးလဲဆိုတော့ ဒီစာအုပျ (၃) အုပျလုံးက နာမညျတဈလုံးတညျးပဲပါတယျ ယောငျးရဲ့။ စာအုပျတှကေတော့ …
မကွာသေးခငျက ဝကျဝကျကှဲနာမညျကွီးသှားတဲ့ “မီ”။ မီ ရဲ့ ကလောငျရှငျကတော့ ဆရာမကွညျအေး။ ပြော့ခှကေလြာတဲ့ တှယျရာမဲ့ မီ။ လောကကိုရှဲ့နတေဲ့ သနားစရာ မီ။ ဖြော့တော့တဲ့အလှပိုငျရှငျ မီ။ ယောကျြားတှကေို ရူးစတေဲ့ မီ။ သတငျးကွီးလှတဲ့ မီ နဲ့ ဦးသျောဆှတှေကွေ့တဲ့အခါ ဦးသျောဆှကေော အခွားပုရိသတှလေိုပဲ မီ့ဆီမှာ ကရြှုံးသှားမှာလား ? မီ့မှာဘယျလို နာကညျြးခကျြတှရှေိနလေဲ ? မီနဲ့ ပကျသကျနတေဲ့ မောငျကိုလေး၊ မွို့ပိုငျဦးဘခဈြ၊ သူဌေးဦးတငျမောငျ၊ နာမညျကွီးလူမိုကျရှဓေားမွောငျတို့ကွားမှာ ဘာအရှုပျအရှငျးတှေ ပျေါလာဦးမလဲ ? ဆိုတာတှကေို ဆရာမကွညျအေးရဲ့ “မီ” ဝတ်ထုမှာ ဖတျရမှာဖွဈပွီး မီ့ကို အပွငျလောကမှာပါ ရငျးနှီးနသေလို ခံစားစရေမယျ့ ဝတ်ထုတဈပုဒျပါ။
Related article >>> ဝတ်ထုဖတျရငျး ကိုယျတိုငျဝငျရောကျခံစားနရေသလို စီးမြောသှားမယျ့ ရသစာအုပျ(၃)အုပျ
ဆရာကွီးဒဂုနျတာရာရဲ့ “မေ” က မကျြလုံးပွာပွာ ရုပျရညျသနားကမားနဲ့ ဘိုဆနျဆနျ မိနျးကလေးတဈယောကျ။ မကေ အထကျတနျးလှာလူကုံထံအသိုငျးအဝိုငျးတှငျ ဝငျဆံ့ခငျြပမေဲ့ ဝငျဆံ့လောကျတဲ့ ပစ်စညျးဥစ်စာငှကွေေးမရှိ။ ဒီတော့ သူ(မ)ရဲ့ အလှနဲ့ မာယာကို သုံးပွီး သူ(မ)ခုံမငျတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးထဲဝငျဖို့ ကွိုးစားတဲ့အခါမှာ ဘယျသူတှကေ မဘေ့ဝရဲ့ တဈစိတျတဈဒသေအဖွဈပါဝငျလာမှာလဲ ? ဘဝရဲ့ဇာတျခုံမှာ မတေဈယောကျ ဘယျနရောကနေ ကပွမှာလဲ ? ငှမေကျလှနျးတဲ့မေ အမှားတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့မလဲ ဆိုတာတှကေို သငျခနျးစာရဖှယျ ဖတျရှုရမယျ့ ဝတ်ထုတဈပုဒျဖွဈပါတယျ။
Related article >>> မွို့ပွလူနမှေုဘဝတှကေို ပုံဖျောထားတဲ့ စာအုပျလေးနှဈအုပျအကွောငျး
ရှတေောငျကွားရပျကှကျအထကျတနျးလှာအသိုငျးအဝိုငျးမှ ပေါကျဖှားလာတဲ့ “မွိုငျ” ဆိုတဲ့မိနျးမပြိုလေးဟာ ဆရာဗနျးမျောတငျအောငျရဲ့ ကလောငျထကျက ပျေါထှကျလာသူပါ။ ခငျပှနျးမကျြနှာတဈရှာထငျပွီး လိုကျပွေးခဲ့တဲ့ မွိုငျ။ ရှဇှေနျးကိုကျလာရတဲ့ အခွအေနကေနေ အခွခေံလူတနျးစားဘဝရောကျလာတဲ့အခါ ဆငျးရဲဒုက်ခကို ခံနိုငျရညျမရှိတဲ့ မွိုငျ။ အခကျအခဲတှကေ ကရြှုံးစလေား ပိုသနျမာလာစလေား ? သိခငျြရငျတော့ မွိုငျ ကို ဖတျပါ။ ၁၉၅၀ ခုနှဈဝနျးကငျြက အသိုငျးအဝိုငျးကှာဟမှုတှေ၊ နိုငျငံရေးအခွအေနတှေေ၊ ဆငျးရဲသားပွညျသူတှရေဲ့ ရုနျးကနျရတဲ့ ဘဝတှကေို မကျြဝါးထငျထငျသရုပျဖျောထားတာမို့ ယောငျးတို့အကွိုကျတှစေ့မှောပါ။
Related article >>> လူငယျတှရေဲ့ဘဝကိုပွောငျးလဲပေးခဲ့တဲ့စာအုပျ (၅)အုပျ
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး ပိတျရကျမှာ ဖတျစရာစာအုပျကောငျးလေးတှေ တိုးလာပွီထငျပါတယျ။ Stella က စာအုပျကောငျးလေးတှပေဲ စုဆောငျးပေးထားတာမို့ ဖတျဖွဈအောငျဖတျဦးနျော။ ဒါဆို နောကျတဈပတျမှ စာအုပျအသဈလေးတှနေဲ့ ပွနျတှကွေ့မယျ။
Tags: authors, Book review, Books, bookworms, Knowledge, myanmar, novel, writer